रोचक – Namaste Host
September 10, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on विहेको १४ बर्षपछि शहरमा घर किन्न खेत बेचेर खातामा पिस पैसा राखेकै दिन ६४ लाख लिएर प्रेमीसँग श्रीमती भागिन
काठमाडौं । प्रेम अन्धो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले अक्सर सुन्छौँ तर एकदम कम मात्रै त्यस्तो देख्न पाइन्छ । हिन्दु धर्ममा विवाह सात जन्मसम्मका लागि गरिन्छ । यदि दुई मध्ये कसैको बिश्वास टुट्यो भने पति र पत्नीको सम्बन्धमा दरार आउन धेरै समय लाग्दैन । त्यस्तै एउटा घटना भारत, बिहारमा पनि देखिएको छ । जानकारी अनुसार एक […]
August 8, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on डोटीको छहरा झरना आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा
२४ साउन, डोटी । डोटीको जोरायल गाउँपालिका–२ मा पर्ने छहरा झरनामा आन्तरिक पर्यटकहरुको घुइँचो लाग्न थालेको छ । सामाजिक सञ्जाल टिकटक र फेसबुकको माध्यमबाट प्रचारमा आएको जोरायल गाउँपालिका–२ को छहडा गाउँ नजिकै रहेको छहरा झरनामा रमाउन टाढाटाढाबाट मानिसहरु पुग्न थालेका छन् । अन्य दिनको तुलनामा शुक्रबार र शनिबार यहाँ ठूलो संख्यामा आन्तरिक पर्यटक आउने गरेका […]
July 22, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on वोरिपरी जंगल बिचमा छ एक्लो घर , निकै रहस्यमय देखिने यो घरको यस्तो छ कथा , सुनसान एक्लो घरमा बस्छन यी बुढा बुढी
चारैतिर जङ्गल अनि बिचमा छ एउटा सुनसान घर ।चितवन मुङ्लिङ सडक खण्डमा यात्रा गर्दै गर्दा यो घर निकै नै रहस्यमय देखिन्छ ।बिचमा त्रिशुलि खोला अनि पारि भिरमा एकान्तमा एउटा मात्रै घर । यो घर कस्ले बनायो कहिदे बनायो र यो घरमा को बस्छ होला ? यस्तै अनेकौ प्रश्नहरु यात्रा गर्दैगर्दा मनभरि खेल्ने गर्छन् ।शो घरमा […]
July 22, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on फेला पर्यो जे माग्यो तेहि पूरा हुने मन्दिर ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस् मनोकामना पूरा हुनेछ ! यसरी निस्किन्छ अनौठो नाग देवता (भिडियो सहित
July 21, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on बिहेमा बेहुला मा’तेर झ्या’प भएपछि, बेहुली हेरेरै बे’होस ! (भिडियो हेर्नुस्)
July 20, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on यी ४ राशिका ब्यक्ती हुन्छन् जीवनसाथीका लागि असाध्यै भाग्यशाली
हाम्रो आसपास केहि यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन् , जसले आफ्नो जीवनको मुस्किल भन्दा मुस्किल परिस्थिति पनि हल गर्छन् |ज्योतिषशास्त्रका अनुसार केहि राशिका व्यक्तिहरु हुन्छन् जसको भाग्य निकै बलियो हुन्छ | यतीमात्र होइन यिनीहरुको भाग्यको असर उनीहरुको जीवनसाथीमा पनि पर्छ | वृष राशि शुक्र ग्रह यस राशिको स्वामी हो, जसका कारण अरु राशिका व्यक्तिहरु यस राशिका […]
July 19, 2021 July 19, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on बिना मेकअप हिट भएकी यी अभिनेत्रीले २ करोड दिदा पनि किन गरिनन मेकअप ? यस्तो अनौठो कारण –
July 19, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, बे-वास्ता नगर्नुहोला, पूरा पढेर ॐ लेखि सेयर गरौं समाचार
सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवा स्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस । ७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो […]
July 19, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on रौतहटमा अचम्म! कसरी अचानक भासियो शिवलिङ्ग जमिनमुनि? ​स्थानीय डराए
रौतहटमा अचम्म भएको छ । त्यहाँ भगवान शिवको प्रतिमूर्ति जमिनमुनि भासिएको छ । त्यो थाहा पाएर स्थानीय डराएका छन् । त्यहाँको गढीमाई नगरपालिका २ समनपुरस्थित प्राचीन शिव मन्दिरको शिव प्रतिमा जमिनमा भासिएपछि स्थानीयमा डर फैलिएको छ । दिउँसो पूजा गर्दागर्दैको अवस्थामा शिव प्रतिमा सतहभन्दा करिब डेढ फिट तल जमिनमा भासिएपछि स्थानीयवासीमा डर देखिएको हो । […]